Tababaraha xulka Masar oo Maxamed Saalax ugu baaqay inuu ka tago Liverpool…..(Maxay tahay SABABTA?) – Gool FM
Tababaraha xulka Masar oo Maxamed Saalax ugu baaqay inuu ka tago Liverpool…..(Maxay tahay SABABTA?)
(Egypt) 23 Nof 2018. Tababaraha xulka Masar Javier Aguirre ayaa ugu baaqay xiddigiisa Maxamed Saalax inuu isaga tago Liverpool haddii ay kal ciyaareedkan ku guuleysan waayaan wax koob ah.
Maxamed ayaa 44-gool u dhaliyay Reds kal ciyaareedkiisii ugu horreeyay balse nasiib darro wax koob ah ma ay qaadin kooxdiisa oo waxaaba u dheeraa in Dhaawac garabka ah looga saaray Final kii Champions League ay ka qaaday Real Madrid.
Qaab ciyaareedkiisa shidnaa ayaa soo jiitay Real Madrid taa oo eeganeysay inay badel uga dhigto booskii Cristiano Ronaldo.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa baadi goob ugu jirta koobkeedii ugu horreeyay tan iyo 2012 markaa ay ku guuleysatay League Cup, Tababaraha xulka Masar ayaana ugu baaqay laacibkiisa Saalax inuu isaga tago haddii ay ku guuleysan waayaan wax koob ah kal ciyaareedkan.
“Waxaa u fiican isaga inuu tago hal ama labo xilli ciyaareed gudahood haddii ay Liverpool ku guuleysan wayso wax Koob ah,” Tababare Javier Aguirre ayaa sidaa yiri.
Jose Mourinho oo Soo kireysatay Cir-bixiyeen.....(DHULKA ayayba Man United ku ciyaartaa ee maxaa CIRKA ka galay!!!)